Umzi-mveliso ogqwesileyo wokuLahla kwaMafutha oMenzi
I-AASraw inikezela ngeentlobo ze-powder yokulahlekelwa kwesisindo kunye nokunikezelwa okuzinzile, yonke imveliso igqityiwe phantsi kolawulo lwe-cGMP kunye nomgangatho unokulandelwa nangaliphi na ixesha. Ukongezelela, umyalelo omkhulu unokuxhaswa ngexabiso elikhuphisana kakhulu.
Thetha nge-AASraw Ngoku
Thenga i-Weight Loss Powder
Cela isicatshulwa ngokukhawuleza
I-Cetilistat (Oblean) Powder(282526-98-1)-COA
I-Orlistat Powder (96829-58-2)-COA
I-Lorcaserin HCL Powder (1431697-94-7)-COA
1. Imbali yeZiyobisi zokuLahla ubunzima
2. UHlelo lokuLahla kweziyobisi
3. Ezona zi-3 zidumileyo zokuLahla uPowder kwiMarike
4. Indlela yokuthenga iPowder esebenzayo yokuLahla ubunzima kwi-Intanethi?
1.Imbali yeDrug Loss Weight Loss
Isisindo sokulahlekelwa kwesisindo sokuqala, esibizwa ngokuba yi-fat reduction at the time, safumaneka emva kwee-1800. Nangona eso sigqirha sabangela imiphumo emibi kakhulu, saqhubeka sifumaneka ukusetyenziswa kuze kube yi-1960.
Iyeza elitsha elaziwa ngokuba yiDinropropol lafakwa kwii-1930 kwaye yaziwa kakhulu ekulawuleni ukulahleka kwesisindo. Isilwanyana senze i-thermogenic effect ngaphakathi emzimbeni, ukuququzelela ukulahleka kwesisindo.
Phakathi kwe-1950s, i-amphetamines yafumaneka kwaye yaba yinto yokulahleka kwesisindo esinqunyiwe. Yenza ukulahleka kwesisindo ngokunciphisa ukutya. Ngokudabukisayo, yandisa ingozi yomshukela wegazi, okwenza ukuba ihoxiswe kwi-market ye-1968.
Kwi-1970s, i-ephedrin yaba yonyango olumiselweyo lokulahleka kwesisindo. Noko ke, isichengisisi senza ukuba kubekho ukuphazamiseka okubangelwa ukuba kubhengezwe ukuba yingozi.
Kwi-1973, i-fenfluramine yavunywa njenge-supplementary weight loss supplement. Udumo lwayo lwaphakama kwi-1992 xa ludibaniswe ne-phentermine ukudala isilwanyana esilahlekelwa sisisindo esibizwa ngokuba yi-fen-phen. Ngokudabukisayo, le nkunkuma yabangela imiphumo emibi, eyabangela ukurhoxiswa kwayo kwimarike kwi-1997. Kwiminyaka ye-21X, isisindo sokulahlekelwa kwesisindo, amaninzi esekelwe kwimimiselo yamanzi, ikhukhula kwiimarike.
I-database ehlonishwa kakhulu evela kumaZiko ezeMpilo eSizwe
2.Ubunzima boKuhlelwa kweziyobisi
Ubunzima bokulahlekelwa kwezidakamizwa zihlulwa zibe ziintlobo ezi-3 ezinkulu ngokubhekiselele kwindlela yazo yokusebenza kwaye zilandelayo:
(1) Ukunciphisa ukutya (ukutya)
Iziyobisi ezinokuthi ukutya okunciphisa ukutya kuthiwa yi-sympathomimetic agents. Ngokuqhelekileyo banqanda ukuthanda ukutya ngelixa besondeza i-satiety ngaphambi kwexesha eliqhelekileyo. I-Satiety yiyo "epheleleyo" invakalelo okanye ukwaneliseka okufumaneka ekutheni ukutya. Ukunciphisa ukutya kusebenza ngokulinganisa i-neurotransmitter kwingqondo yomntu elawula isondlo, eyaziwayo njenge-noradrenaline (NA).
La machiza abelana ngesakhiwo seekhemikhali esifanayo kunye ne-NA kwaye inako; ngenxa yoko ubophelela kwii-receptors ezifanayo njenge-noradrenaline. Amachiza aphinde aphucule umsebenzi we-noradrenaline "kwiziko lokutya" lobuchopho bomntu, i-hypothalamus. I-hypothalamus yomntu ilawula ukulingana kwamandla kwinkqubo yomzimba. Ulwazi malunga neevenkile zamandla ngamnye zenziwa kwi-hypothalamus elawula ukutya kunye nokutya. I-Noradrenaline yokubopha kunye nomsebenzi kwi-hypothalamus inomphumela wokunciphisa ukutya. Amachiza anjalo aquka:
❶ I-Lorcaserin HCL(Belviq) CAS: 1431697-94-7
❷ I-Rimonabant HCL CAS: 158681-13-1
❸ I-DNP CAS: 119-26-6
(2) Ukutshiswa kwamafutha
Amafutha atshisa iziyobisi ezinciphisa ubunzima anokunceda ukulahleka kwamafutha ngokunciphisa iminqweno, ukuphucula imetabolism, kunye nokugcina ukutya okunempilo. Banokwandisa amandla okuzilolonga ngokunyusa amandla kunye nokugxila. Amachiza anjalo aquka:
❶ I-CAS ye-Synephrine: 94-07-5
❷ DMAA/1,3-Dimethylpentylamine CAS: 13803-74-2
(3) Ukuphucula ukugonya
Ezi zithintelo zokusetyenziswa kweziyobisi zisebenza ngokuphazamisa amandla okugcoba inkqubo yokugcoba izondlo ezithile kwisondlo. Ngokomzekelo, i-Orlistat iyaziwa ngokuthintela ukuphazamiseka kwamafutha kwaye oko kukuthintela ukunyuswa kwamafutha. Ezinye izongezelo ezininzi ziye zafakwa ekunciphiseni i-caloric absorption kunye nokukhutshwa kwamanzi. Kule post, siza kuxubusha ngaphezulu malunga nezi zilandelayo zibisi:
❶ I-Orlistat CAS: 96829-58-2
❷ I-CAS ye-Cetilistat: 282526-98-1
3.I-3 Eyeyona idumileyo yePowder yokuLahla ubunzima kwiMarike
(1) I-Orlistat CAS: 96829-58-2
I-Orlistat yindlela enamandla ye-pancreatic kunye ne-gastric lipase inhibitor. Zonke i-triglycerides zondlo zixhaswa nge-pancreatic and gastric lipases. I-lipases i-enzymatically idiliza i-triglycerides ibe ngamafutha e-free acids angaphinda afakwe emathunjini amancinci. I-gastric ne-pancreatic lipase inhibitors zenza izibophelelo kunye ne-pancreatic kunye ne-gastric lipases kwi-lumen yesisu esincinci nesisu esenza ezi enzyme zingakwazi ukusebenza ngokuchanekileyo.
Ngendlela yokuvimbela ukusebenza kwee lipases, ukutya okugcobileyo okunamafutha kunqatshelwe, kwaye i-triglycerides ixutywe emanzini. I-Orlistat yokulahleka kwesisindo ikhubaza i-30 ekhulwini yefuthe lezondlo ekudleni ekungeneni kumzimba womntu (xa iipesenti ze-30 zamandla ekudleni zibonelelwa nge-triglycerides). Ukunciphisa umlinganiselo wesisindo emva komnyaka omnye kunye ne-Xenical (orlistat) kunye nokutshintsha kwindlela yokuphila kujikeleze i-8.5 kg.
Ngokunciphisa ukunciphisa i-triglycerides yokutya, i-orlistat ukulahleka kwe-powder ifunyenwe:
Yiba nefuthe elihle kuxinzelelo lwegazi;
Ukunciphisa ukufunxa kwe-cholesterol kwaye ngoko ke amanqanaba e-cholesterol (kunye ne-LDL cholesterol);
Ukwandisa ukumelana ne-insulin; kwaye
Ukwandisa ulawulo lwe-glycemic.
Kucingelwa ngokubanzi ukuba i-orlistat ye-gastrointestinal ye-gastrointestinal imiphumo engathandekiyo yenza ngendlela efanayo nokuqiniswa okungalunganga, okukhuthaza abo bakweli mayeza ukuba babambelele ngokungqongqo kwi-fat-fat diet.
(2) I-CAS Ceististat: 282526-98-1
I-Cetilistat yinto esebenzayo ngomlomo, inoveli, i-pancreatic kunye ne-gastrointestinal lipase inhibitor. Ichiza le-Cetilistat lokulahleka kwesisindo lichiza elenzelwe ukunyanga ukutyeba. Isebenza ngendlela efanayo nechiza ebekuxoxiwe ngalo ngaphambili elaziwa njengeXenical (orlistat) ngokulawula i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathunjini ethu. Ngaphandle kwezi enzymes, i-triglycerides ekutyeni kwethu ithintelwe ukuba igaywe ibe yi-fatty acids yamahhala enokuthi ifunxwe kwaye isuswe kumzimba ongaxutywanga.
Kwizilingo zeekliniki ezibandakanya izigulane ezinamafutha angenawo uhlobo lwe-2 sikashukela kunye nezigulane ezigqithisileyo eziphila nohlobo lwe-2 yeswekile. Xa i-Cetilistat yokulahleka kwesisindo i-powder yalawulwa iiveki ezilishumi elinambini, iyanciphisa kakhulu umzimba, i-cholesterol epheleleyo, i-serum low-density lipoprotein cholesterol ngokukhawuleza ngokuthelekisa ne-placebo.
Ipesenteji yezigulane ezigqithiseleyo zibonisa ukunciphisa kakhulu ubunzima bomzimba obuncinane bokuba ubuncinane bepesenti ze-5 ziphezulu kuzo zonke iingalo ezisebenzayo xa kuthelekiswa ne-placebo. Kwizigulane zesifo sikasifo sikasifo sikashukela, i-HbA1c (i-glycosylated hemoglobin) namanqanaba ayehliswa kakhulu. I-Cetilistat ukulahlekelwa kwesisindo semfuyo ibonise imodareyitha kwimiphumo emibi kakhulu, ebangela ukuba i-steatorrhea (imvelo yesisu) ibe nesiganeko esincinane kunokuba i-orlistat. Esi sigqirha satshatyelwa eJapan ukuba siphathe ukukhuluphala kunye nezinye iingxaki.
(3) I-Lorcaserin HCL(Belviq) CAS: 1431697-94-7
I-Lorcaserin HCl imisebenzi yeziyobisi ukulawula imetabolism kunye nokutya. Ichiza livunyiwe yi-FDA ngonyaka ka-2012 kubantu abane-BMI engaphezulu kwe-30, kunye nezigulane ezine-Body Mass Index ye-27 okanye ngaphezulu nazo zine-cholesterol ephezulu, uxinzelelo lwegazi, kunye nohlobo lwe-2 yeswekile. Ichiza likwasebenza ekuphuculeni i-serotonin 2CV receptor kwingqondo yomntu enokunceda izigulana ukuba zizive zizele emva kokuthatha kancinci. Kwizilingo zonyango, i-38% yabantu abadala (ngaphandle kohlobo lwe-2 yeswekile) balahlekelwa ngaphezu kwe-5% yesisindo somzimba wabo, xa kuthelekiswa ne-16% yabantu abadala abaphathwa nge-placebo. Ekubeni i-sibutramine powder yavalwa e-China, i-lorcaserin hcl powder iyona ndawo ibhetele kwimarike kwaye abaninzi ababoneleli abazinikele ekuveliseni iziyobisi zokulahlekelwa kwesisindo bakhetha ukusebenzisa i-lorcaserin hcl powder.
4.Indlela yokuthenga iPowder esebenzayo yokuLahla ubunzima kwi-Intanethi?
Njengoko kuboniswe kwingxoxo yethu enzulu, kukho izidakamizwa ezininzi zokulahlekelwa kwezilwanyana eziphuma apho ezivela kwiinkalo ezahlukeneyo zezinto eziphilayo. Uninzi lwale michiza lufunyenwe lusebenza kakuhle, kwaye amanye awo avunywe ngamagunya athile afana ne-FDA kunye neJapan, ukukhankanya ambalwa, kunyango lokunyanya.
Emva kokuchitha iiyure ezininzi uphando malunga neziyobisi zokunciphisa umzimba, sakwazi ukuchonga ezimbalwa ze-2018 World's Best-Selling Weight Loss Powder Supplements. Ezi zongezelelo ze-powder zokulahlekelwa kwesisindo ziquka i-orlistat i-powder yokulahleka kwesisindo kunye ne-lorcaserin yokulahlekelwa kwesisindo somgubo. Ngokungafaniyo ne-crap yezongezelelo zokuncipha kobunzima ezifunyenwe nakweyiphi na ivenkile yamachiza, la mayeza okunciphisa ubunzima amiselwe ngoochwephesha bezonyango baye badlula iminyaka yovavanyo ukuze bafumane isitampu semvume kwi-FDA kunye nezinye iindawo ezininzi. Sincoma kakhulu ukuba uzame la machiza kuba abonakaliswe ukuba awasebenzi nje kuphela kodwa akhuselekile ukuwasebenzisa.
Unokubuza indlela yokuthenga i-powder powder orlistat powder esebenzayo kunye ne-lorcaserin hcl powder. Baninzi abathengisi bepowder yokulahleka kwesisindo kwi-intanethi kwaye kufuneka bafumanise ukuba yeyiphi eyona ilungileyo kuwe. Kufuneka uhlawule ingqalelo ngakumbi kumgangatho weemveliso kunye nokuba zinokuthunyelwa kuwe ngokukhuselekileyo, ukuba ufuna ukuthenga i-powder yokulahlekelwa kwesisindo ngobuninzi, kufuneka wazi ukuba inkqubo yabo yokubonelela kunye nokuba izinzile, cinga malunga nokuthatha i-odolo yesampuli phambi kobuninzi. iodolo, yithathe uyoyivavanya kwi-professional 3rd-Labs kwaye ujonge umgangatho. Ngapha koko, ukufumana umthengisi okumgangatho ophezulu akuyonto ilula, kufuneka ubeke ixesha elininzi kunye namandla kuyo.
Ukuthenga i-genius weight loss / diet drug powder eluhlaza kufuneka ulumke kakhulu, ngakumbi ngokuthenga kwi-intanethi kumazwe ngamazwe. Kukho imithombo emibini emininzi ebanga ukuba ibonelela ngempahla yengqondo kodwa ingqinwe njengabaqhathi. I-AASraw ibonelela kwaye ibonelela kuphela ngempahla yengqondo. Iyaqatshelwa ngabantu abaninzi kunye neenkampani, zinokubonelela ngepowder yokulahleka kwesisindo sobuninzi, njenge-lorcaserin hcl, i-orlistat, i-Cetilistat. Iingxelo zovavanyo lobuchwephesha zinokwabelwana ngazo kwaye zibonisa i-98% min ubunyulu. Unokuthetha neentengiso ze-aasraw ngolwazi olungakumbi kwi-intanethi!
1.I-lorcaserin ikunceda njani ukuba ulahlekelwe isisindo?
Ukunciphisa umzimba, i-Lorcaserin isebenza ngokuchaphazela imvakalelo yomzimba yokuziva ugcwele ngokutshintsha amanqanaba e-serotonin kwingqondo. Kungale ndlela i-Lorcaserin inokusebenza ngayo ukunyanga umlutha we-opioid.
2.Ingaba i-lorcaserin hcl powder ilawulwa?
Nangona kungenjalo i-stimulant, i-lorcaserin inokubangela ukuxhomekeka kweziyobisi kunye nokusetyenziswa kakubi. Ngenxa yalesi sizathu, uLawulo lwezoLawulo lweeDrug (DEA) luludweliswe phantsi koMthetho weMiqathango yoLawulo kwiShedyuli IV.
Ngoko, balawula njani umyinge womlinganiselo? Ndiza kucacisa. Ukugqithisa kwamanzi kungabonakala ngengozi kodwa ke kusenokuba kungenxa yokufuduka komnqweno wokuvuselela umsebenzisi. Ukuze uvelise ubunqunu, unokuyizalisa kuphela imimiselo yeenombolo eziliqela.
Ezinye zeempembelelo ze-lorcaserin zibandakanya i-hallucinations, evakalelwa 'phezulu', i-sedation, okanye i-euphoria. Kwiimeko ezimbalwa, ezinye izigulane ezishiye umthamo zibonise iimpawu zokurhoxa. Zonke ezi zinto zinobungqina obanele ukuba unyango lunokubangela ukuxhomekeka kwengqondo.
3.Ngaba i-weight-loss loss drug lorcaserin hcl ikhuselekile?
Uphononongo olukhulu lufumene iziphumo ezithembisayo zokhuseleko lweyeza lokunciphisa umzimba elikhoyo e-US. Uphononongo, olupapashwe kwiNew England Journal of Medicine, luthi abantu abadala abasebenzisa i-lorcaserin yeziyobisi balahlekelwe ngumyinge we-4kg (8.8lb) ngaphezu kwe-40 iinyanga. Ithi ichiza, elisebenza ngokucinezela ukutya, alibabeki abantu emngciphekweni omkhulu wemiba yentliziyo. Kodwa iingcali zigxininisa ukubaluleka kokutshintsha kwexesha elide lokuphila ekufezekiseni ukulahleka kwesisindo esisebenzayo.I-Lorcaserin ikhona e-US iminyaka emininzi phantsi kwegama elithi Belviq, kodwa akukavunyelwa ukuba isetyenziswe eYurophu.
4.I-Orlistat iyasebenza ekulahlekeni kwesisindo?
I-Orlistat isebenza ngokuthintela amanqatha asuka kukutya okutyayo ukuba afakwe emzimbeni wakho. La mafutha ekugqibeleni aphuma emzimbeni ngokusebenzisa ilindle lakho.
Ukuze i-Orlistat isebenze, kufuneka isetyenziswe ngokubambisana namanye amaqhinga okunciphisa umzimba. Ezi ziquka inkqubo yokuzivocavoca rhoqo kunye nesicwangciso sokutya okunempilo. Xa ithathwa ngokwayo, i-Orlistat ayinakunciphisa ubunzima, njengoko ingatshisi amanqatha akhoyo.Ukuba isetyenziswe kunye neendlela ezongezelelweyo zokunciphisa umzimba, i-Orlistat ibonakaliswe ukuba iyasebenza ekuncedeni ukulahleka kwesisindo.
Olunye uphando lufumene ukuba abantu abathatha i-Orlistat kwaye bagcina ukutya okuphantsi kweekhalori balahlekelwa ngumyinge we-1.25 ilitye (8.1kg) ngonyaka, eyayiyi-6lb (2.8kg) ngaphezu kwalabo abangazange bathathe i-Orlistat ngexesha elifanayo. Olunye uphando lufumene ukuba izigulane ze-743 ezityebileyo ezithatha i-Orlistat yokulahlekelwa kwesisindo ziye zalahleka kumyinge we-10.3kg yesisindo emva konyaka omnye. Oku kuchasene nezigulane ze-6.1kg ezingathathi i-Orlistat ezilahlekileyo.
Olunye uphononongo lukwafumanise ukuba abantu abalandela le khosi yonyango banokuphulukana ukuya kuthi ga kwi-10% yobunzima bomzimba wabo ngonyaka.
5.Ngubani omele asebenzise i-orlistat powder?
I-Orlistat yokulahlekelwa kwesisindo ithathwa kakuhle ngabo bazama ukunciphisa umzimba ngezinye iindlela. Ngaphambi kokuba uqale i-Orlistat, kufuneka uqale uzame ukunciphisa umzimba ngokutya okulawulwa yikhalori kunye nokuzivocavoca rhoqo. Kufuneka kwakhona ucinge ngokuyeka ukutshaya kunye nokunciphisa utywala bakho ngaphambi kokuba uthathe iyeza. Emva kokuthatha i-Orlistat kwiiveki ezimbalwa, unokulindela ukubona ukulahleka kwesisindo esimangalisayo. Elona nani liyahluka phakathi kwabantu, kuxhomekeke kwindlela abatya ngayo kunye nemithambo.
Uphononongo lwe-6.Orlistat powder: ngaphambi nangemva
Zak (4th, Matshi 2021): Esi sisicwangciso sokuqala sokunciphisa umzimba endiye ndakwazi ukunamathela kuso. Ndincoma kakhulu i-Orlistat powder. Ukuba awuzithandi "iziphumo zonyango", ngoko ngokwenene ukubukela ukutya kwakho kwamafutha! Andikwazi ukuthetha ngokwaneleyo malunga ne-Orlistat powder. Ndifumene ukuba ndinganakho ukutya okwahlukeneyo - kodwa ubukhulu besahlulo ngundoqo!
UJimmy(16, Epreli. 2020): Iiveki ze-3 ukuza kuthi ga ngoku zilungile kuba ndithenga i-orlistat powder kwi-intanethi kwaye ndizame ezinye. I am lost the weight slow yilento ndiyifunayo ukuze ndingabinayo yoyo affect. HLALA ekutyeni kwakho okunamafutha aphantsi. Ndayitya i-pizza ngenye imini ndalandela izilayi ezibini zesidlo sakusasa ndaye ndaphuma iorenji enamafutha xa ndihambisa igesi okanye ngexesha lokukhupha isisu. Ewe iya kukwazisa xa utye kakhulu okanye into engalunganga. Bala iikhalori zakho utya imifuno eninzi kunye neziqhamo. Sela amanzi. Emva kokufunda ezinye iimpembelelo zecala kuyandinceda ukuba ndinamathele ku-Alli kuba xa isenzeka uya kuzonwaya intloko ngengcinga UhUh, oh hayi, uyandigezela.
Bob(24, Sep. 2021): Ndilahlekelwa iipounds ze-6 ngeveki enye kunye ne-orlistat powder .. kodwa ndidla ukutya okunempilo mon thru fri: ukutya okunamafutha aphantsi kunye neekhalori eziphantsi kunye neempelaveki ndidla nantoni na ephakathi. Kwakhona, ndihamba imizuzu engama-45 yonke imihla kwaye ndidlala i-tennis iiyure ezi-3 kwi-sat.
Njengoko uphononongo lungentla lungqina, amava abathengi bethu be-Orlistat njengonyango lokunciphisa umzimba alungile kakhulu. Nazi izinto ezimbalwa eziphambili kuphononongo lwethu lwabathengi be-Orlistat ebalulwayo:
♦ Isebenza kakuhle ekuncedeni izigulane zilahlekelwe isisindo
♦ Kukulungele ukukhaba isicwangciso sokunciphisa umzimba
♦ Iluncedo ekulahlekeni kobunzima obucothayo kodwa obuzinzileyo ngeveki
♦ Kuluncedo ekunciphiseni amanqanaba e-cholesterol
Ngokubanzi, abathengi bethu bakhomba i-Orlistat njengendlela ethembekileyo nesebenzayo yokunciphisa umzimba.
7.Iyintoni imiphumo ye-orlistat?
Iziphumo eziqhelekileyo zecala le-Orlistat
Iziphumo ezixhaphakileyo ze-Orlistat zihlala zichaphazela umntu omnye kwabayi-10. Oku kubandakanya oku ngezantsi, kodwa eyona mpembelelo ixhaphakileyo ziintloko:
▪ Ilindle elinamafutha okanye elinamafutha okanye ukuphuma okunamafutha kumngxuma wokukhupha ilindle — jonga iindawo ezinamafutha kwimpahla yakho yangaphantsi.
▪ Ukukhutshwa kwamathumbu ngokukhawuleza okanye okwandisiweyo
▪ Ukwanda kwe-flatulence, ngamanye amaxesha kunye nokuphuma
▪ Intloko ebuhlungu
▪ Ukosuleleka komgudu ongasentla wophefumla (RTIs), njengengqele
▪ Iintlungu zesisu okanye ukungakhululeki
Zonke ezi ziphumo zezokwexeshana kwaye kufuneka zidlule ngokuhamba kwexesha. Nangona kunjalo, ukuba uhlangabezana nazo ixesha elide, okanye ziba mbi ngakumbi, qhagamshelana nogqirha wakho ngokukhawuleza.
Iziphumo ezingaphantsi eziqhelekileyo ze-Orlistat
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-Orlistat apha ngezantsi aziqhelekanga kunezo zidweliswe ngasentla kwaye ziquka:
▪ Ilindle elithambileyo
▪ Ukungakwazi ukuzibamba kwilindle
▪ Ukuphazamiseka kweentsini namazinyo
▪ Ukuqunjelwa — oku kuxhaphake kakhulu kubantu abanesifo seswekile sodidi lwesi-2
▪ Amaxesha angaqhelekanga
▪ Ukosuleleka komjelo wokuphefumla
▪ Iintlungu zomqolo okanye ukungakhululeki
Ukuba ufumana naziphi na ezi ziphumo bezingalindelekanga ixesha elide okanye iimpawu zakho ziqala ukuba mandundu, thetha nogqirha wakho ngokukhawuleza.
8.Ndingayinciphisa njani imiphumo ye-Orlistat?
Uninzi lweempembelelo ze-Orlistat zesikhashana kwaye zihamba kunye nexesha. Ukuba iziphumo zakho ebezingalindelekanga azipheli, thetha nogqirha wakho ngokukhawuleza. Kunokwenzeka ukunciphisa imiphumo ye-Orlistat ngokulinganisa ukuba ungakanani amanqatha odlayo kwisidlo ngasinye.
I-Orlistat isebenza ngokumisa amanqatha ekutyeni kwakho ukuba afakwe emathunjini. Ikhupha amanqatha angafunxwanga ngamathumbu. Nangona kunjalo, i-Orlistat inokulahla kuphela amanqatha amaninzi ngokutya. Ngenxa yoko, ukuba udla ukutya okungaphezulu kwe-1-15 grams yamanqatha, unokufumana iziphumo ze-Orlistat rhoqo. Ukunciphisa imiphumo emibi ye-Orlistat, ungadli ngaphezu kwe-1-15 grams yamanqatha kwisidlo ngasinye ukuba uthatha i-Orlistat 120 mg capsules.
Unokunciphisa iziphumo ze-Orlistat ngokunamathela kwidosi echanekileyo ye-Orlistat. Ukuthatha ngaphezu kwe-dosage ephakanyisiweyo ye-Orlistat emva kokutya kwandisa iziphumo zayo, ngoko unamathele kwi-dosage ecetyiswayo.
9.Usebenzisa njani i-Cetilistat powder ukuphatha ukukhuluphala?
▪ I-Serotonin kunye ne-noradrenaline reuptake inhibitors (i-anorectic agents)
▪ I-Lipase inhibitors
▪ b 3-adrenoreceptor agonists
▪ Abadlali beLeptin
▪ I-agonists ye-Melanocortin-3
▪ I-Endocannabinoid receptor antagonists
I-Cetilistat powder yi-lipase inhibitor, kunye nenkqubo yesenzo esifanayo kwi-Roche's anti-obesity medication orlistat powder eyafumana imvume yokulawula kwi-1997. Ezi ziyobisi zisebenza kwi-gastrointestinal tract inhibit lipases, i-enzymes echaphazelekayo ekuqhekekeni kwamafutha okutya. Ngokuthintela ukuqhekeka kunye nokufunxwa kwamafutha alandelayo emathunjini, i-lipase inhibitors iyanciphisa i-fat intake kunye neekhalori, ngaloo ndlela inceda ukulahleka kwamafutha.
I-10.Orlistat Powder Vs i-Cetilistat powder
izinto Ubungakanani bePowder Cetilistat powder
Inombolo yeCAS 96829-58-2 282526-98-1
Inkqubo yesenzo I-Orlistat ayisebenzi ngokucinezela ukutya; kunciphisa umthamo wamafutha afunxa umzimba wakho kukutya okutyayo. I-Cetilistat yi-gastrointestinal lipase inhibitor evimba ukugaywa kwamafutha kunye nokufunxa, okukhokelela ekunciphiseni ukuthathwa kwamandla, kwaye ngaloo ndlela ukulahleka kwesisindo.
Isistim I-120 mg ngomlomo kathathu ngemini kunye nesidlo ngasinye esiyintloko esinamafutha. 120 mg kathathu ngosuku ngokukhawuleza emva kwesidlo ngasinye.
Imiphumela ▪ Irhasi ephumayo, ngamanye amaxesha ibe namabala anamafutha
▪ Ilindle elixegayo, ilindle elinamafutha okanye urhudo
▪ Ukuba lindle rhoqo okanye ukuphuma kwamathumbu ekunzima ukuwalawula
▪ Intlungu esiswini
▪ Ilindle elixengayo
▪ Ukungakwazi kuzibamba ilindle
▪ Iintlungu Zesisu
▪ Umlomo Owomileyo
Reviews I-RETELEKILEYO ☆ enkosi
 "Imiba ye-FDA iPhendula iLetter ye-Lorcaserin New Drug Application". I-23 Oktobha 2010. Igcinwe kwi-original kwi-24 Oktobha 2010.
 Higham, George (5 Juni 2020). “ᐅ I-Orlistat & Xenical: Ngaba Iipilisi Zokuthoba Ubunzima Ziyasebenza? | e-Surgery”. utyando lwe-e. Ibuyiselwe nge-9 kaJuni 2020.
 "Iipilisi zokutya ze-Fake Alli zinokubeka impilo emngciphekweni". CNN. Nge-23 kaJanuwari 2010. Ibuyiselwe nge-24 kaJanuwari 2010.
 Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K: Cetilistat (ATL-962), inoveli ye-pancreatic lipase inhibitor, iphucula ubunzima bomzimba kunye nokuphucula iiprofayili ze-lipid kwiirats. IHorm Metab Res. 2008 Aug;40(8):539-43. doi: 10.1055/s-2008-1076699. Epub 2008 May 21.
 Devarajan, Uma (1 Matshi 2009). "Imiba yamanqatha". I-Deccan Chronicle. Ibuyiselwe ngomhla wama-26 kuNovemba ka-2009.
 Ebhalwe ngoonobumba abancinane a kwipakethelo, kunye nebha phezu kwe-i (oko kukuthi, “alī”), kodwa yenziwe ngoonobumba abakhulu ngokwesiqhelo kwincwadana.
 Pollack A (16 Septemba 2010). "Iphaneli ye-FDA iyala iPilisi yokutya". INew York Times. Igcinwe kweyoqobo ngomhla we-17 kaJulayi 2011.
 "Ukusetyenziswa kweLorcaserin Ngexesha Lokukhulelwa". Drugs.com. Nge-4 kaNovemba 2019. Ibuyiselwe nge-14 kaJanuwari 2020.
 Padwal, R (2008). "I-Cetilistat, i-lipase inhibitor entsha yonyango lokukhuluphala". Uluvo lwangoku kwiZiyobisi zoPhando. 9 (4): 414–21. PMID 18393108.
I-AASraw inikezela ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu kunye nokuthunyelwa okukhuselekileyo.Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngokukhawuleza!